हास्यकलाकार बले र अभिनेत्री आँचल शर्मा अभिनित गीत ‘माया पिरती’ (भिडियो हेर्नुहोस)
प्रकाशित मिति : May 6, 2019
काठमाडौं । हास्यकलाकार सागर लम्साल (बले) र अभिनेत्री आँचल शर्मा अभिनित गीत ‘माया पिरती’ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतमा आवाज तिलक बस्नेत र मोलिसा आले मगरको रहेको छ ।
शब्द तथा संगीत गायक बस्नेतको नै रहेको छ भने संगीत संयोजन कमल सागरले गरेका छन् । भिडियोमा आँचल ,बलेको अलवा सुशिल तमाङको अभिनय रहेको छ ।
म सुन्दर छु, तर सेक्सी छैन – आँचल शर्मा !
ऐनामा हेर्दा आफू कती सुन्दर लाग्छ ?
ऐनामा जसले पनि आफूलाई सुन्दर नै देख्छ । मैले पनि आफूलाई राम्री नै देख्छु । अरुले गर्नुभएको प्रशंसा सुन्दा म राम्री छु जस्तो लाग्छ ।
आफ्नो शारीरिक बनावटप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
म एकदमै सन्तुष्ट छु । मैले जे लगाए पनि सुहाउछ । त्यसैले पनि म आफ्नो शारीरिक बनावटमा खुसी छु ।
शरीरको सबैभन्दा मन परेको अंग कुन हो ?
मलाई मेरो ओठ मनपर्छ । मेरो ओठ राम्रो भएका कारण म सधै हासिरहेको हुन्छु । अरुलाई आकर्षित गर्ने पनि यही ओठ नै हो जस्तो लाग्छ ।
अनि मन नपर्ने नि ?
मेरो कान एकदमै ठुलो छ । त्यसैले कान मन पर्दैन ।
तपाईको राम्रो बानी के छ ?
म एकदमै फ्रेण्ड्ली छु । जो सँग पनि छिट्टै घुलमिल हुन सक्छु । म भित्र जे छु बाहिर पनि त्यस्तै छु ।
नराम्रो बानी पनि होला ?
नराम्रो र राम्रो एउटै हो । नराम्रो बानीमा पनि छिट्टै घुलमिल हुने नै होला । यो बानी कहिलेकाही मेरा लागि घातक बनेको छ ।
कस्तो कुराले दुखी तुल्याउछ ?
म त साह्रै कमलो मनको छु । सानो सानो कुरामा नै खुसी अनि सानो कुरामा नै दुखी हुन्छु ।
तपाई कहिल्यै रुनु भएको छ ?
ए कत्ति कत्ति । म त लुडोमा हारे भनेपनि रोइदिन्छु । मेरो रुवाई नै मेरा लागि शक्ति हो जस्तो लाग्छ ।
तपाई गफाडी कि रिजर्भ ?
(हास्दै) म त लास्टै गफाडी छु । तर, परिस्थिती हेरेर चुप पनि बस्न सक्छु ।
आफूलाई कत्तिको सफल ब्यक्ती ठान्नुहुन्छ ?
म आफूलाई अहिले नै सफल ठान्दिन । म त सानै छु । मैले धेरै गर्न बाँकी छ ।
तपाई कत्तिको लोभी ?
म लोभ चाही गर्छु । तर त्यस्तो धेरै लोभी पनि छैन ।
आफू कत्तिको फेसनेबल लाग्छ ?
फेसन भनेर त्यस्तो भंकर पनि हैन । म त जे सुहाउँछ, जे लगाउँदा म सहज हुन्छ त्यसमा नै रमाउँछु ।
खानाको कत्तिको सौखिन हुनुहुन्छ ?
मलाई खान एकदमै मन पर्छ । म त धेरै पो खान्छु त ।
कस्तो मान्छेले तपाईलाई आकर्षित गर्छ ?
हेर्दा एकदमै जेन्टल लाग्ने, कम बोल्ने, मिठो बोल्ने, महिलाको सम्मान गर्ने खालको मान्छेले आकर्षित गर्छ ।
तपाईलाई कस्ता व्यक्ती मन पर्दैन ?
देखावटी व्यबहार गर्ने, नाटक पारेर बोल्ने, ओभर स्मार्ट बन्ने मान्छे फिटिक्कै मनपर्दैन ।
तपाई कत्तिको धार्मिक ?
मेरो घर नजिकै गणेश मन्दिर छ । म त्यहाँ गइरहेको हुन्छु । सानैदेखि मन्दिर जाने बानीले अझै छोडेको छैन । त्यसैले म धार्मिक नै छु जस्तो लाग्छ ।
तपाई कत्तिको सेक्सी ?
म सेक्सी छैन ।
अनि रोमान्टिक ?
त्यो पनि छैन । त्यसको लागि समय आउला ।
(नायिका आँचल शर्मासँगै ‘अप्रेशन आफ्नै’ स्तम्भ अन्र्तगत रहेर अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी)
सागर लम्साल : कसरी बने बले !
हास्य टेलिशृंखला भद्रगोलका बले अर्थात् स्याङ्जाका सागर लम्साल अहिले आफ्नो अभिनय देखाउन विभिन्न देशहरुमा गइरहन्छन् । तर, तिनै पात्र हुन् जो केही वर्षअघि मात्र विदेश जानलाई गरेका कयौं प्रयास सफल हुन नसकेकैले उनी विरक्तिएर हिड्नु परेको थियो । उनी भन्छन् ‘प्लस टु पासपछि सुरुमा क्यानडा जानलाई ट्राई गरे तर भिसा मिलेन,’ उनले आफ्नो विगत कोट्याए, ‘क्यानडा सफल नभएपछि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढ्नका लागि दिल्ली जाने तयारी गरे ।
दिल्ली गएपछि भर्खर पढ्नलाई मेहनत गर्न लाको थिएँ त्यसबखत जन्डिसले गर्दा म थला परे । केही गरे पनि समयमा सन्चो नभएपछि फेरी काठमाडौं फर्किएँ ।’जीवनमा जति हण्डर खाए पनि सागर नराम्रो काममा लाग्दै लागेनन् । बरु उनले आफ्नो पढाइलाई नै निरन्तरता दिए । त्यसपछि उनले काठमाण्डौंमा बिबिए पढ्न थाले । पढाइलाई अगाडी बढाउने निधो गरे पनि उनको पहिले देखिकै कलाकार बन्ने धोको पनि रहेको हुँदा पढाइका अलावा सोही समयमा अभिनय कलासलाई पनि अगाडी बढाए ।
सागर आफ्नो कलायात्राबारे भन्छन् ‘वीरेन्द्र हमाल गुरुसँग अभिनय सिक्न थाले । त्यहि बिचमा मैले मास्टर्स पढ्नका लागि क्यानडाको लागि भिसा अप्लाई गरेको थिएँ र भिसा पनि समयमै आयो । तर, मेरो भित्रि सोख राम्रो कलाकार बन्ने भएकैले कलाकारिता नै रोजे,त्यसबेला क्यानडाको भिसा हातमा आए पनि कलाकारिताकै हुटहुटिले गर्दा क्यानडा पढ्न गइनँ ।’
क्यानडाको अफर त्याग गरेर अभिनयमै केही गर्छु भन्ने मनमा अठोट लिए पनि सागर लम्साल त्यसपछि झण्डै ६ वर्ष जति यताउता गर्दार्दै बित्यो । झण्डै ६ वर्षको कडा मेहनतले गर्दा अब कलाकारितामा पनि केही गर्न सक्छु भन्ने सागरको अठोट थियो । मनमा काम गर्ने अठाट भए पनि कामको केही मेलोमेसो नपाएका सागरले भर्खर कलाकारितामा लाग्दाको त्यो क्षणलाई सम्झिदै भन्छन् ‘मैले निकै मेहनत गरे पनि राम्रो स्थान नपाएको अबस्था थियो त्यो समय ।
त्यहि शिलशिलामा मेरो मनमिल्ने साथीको दाइको पनि साथीमार्फत लोफर फिल्मका निर्देशक आदित्यविक्रम लम्सालसँग धेरै दिनको प्रयासपछि कुराकानी भयो । ‘कुराकानी अगाडी बढ्दै गर्दा आदित्य दाइ त हाम्रै आफन्त पो पर्नुहुँदो रहेछ । सुरुमा उहाँले मेरो सहायक भई काम गरौला भन्नु भएको थियो । पछि विविध कारणले पहिलाको स्क्रिप्ट पूरै चेन्ज गरी नयाँ स्क्रिप्ट तयार भयो । त्यसपछि भने मैले पनि ठिकै रोल मा अभिनय गर्ने ठाउँ भेट्टाएँ र मेरो अभिनय कलालाई सबैसामु देखाउने पहिलो पाइला लोफर फिल्म नै हो, लोफरको त्यही बले पात्रले नै मलाई आज हास्य अभिनेताका रूपमा सबै सामु चिनाएको अवस्था हो ।’
लोफर फिल्मबाट बले बनेका सागर लम्साल भद्रगोल मा आउनुको रहस्यबारे भन्छन् ‘लोफरमा मैले गरेको अभिनय मन पराएर भद्रगोलका कुमार कट्टेल,हरि निरौला र अर्जुन घिमिरे ले भद्रगोलमा पनि बलेकै रूपमा १८औँ भागदेखि अहिलेसम्म निरन्तर प्रमुख पात्रकै भुमिका दिनुभएको छ ’ । भद्रगोलमा आएपछि उनले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन । ठुलो पर्दामा लोफरपछि छविराजकै अर्को फिल्म ‘लज्जा’मा अभिनय गरेका सागरलाई थुप्रै नयाँ फिल्मबाट अफर नआएको भने होइन । तर, भद्रगोलले नै नाम,दाम र सान सबै दिएकै कारण अरु फिल्ममा अभिनय नगरेर भद्रगोलमै रहेको उनी बताउँने गर्छन् ।
कार्यक्रमका सिलसिलामा नेपालका धेरैजसो जिल्लाका साथै करिब आधा दर्जन अन्य देशमा आफ्नो अभिनय देखाउन पुगेका सागर यहि क्षेत्रमा नै आफ्नो करिअर बनाउने योजनामा छन् । सागरले भद्रगोलमा बोल्ने ‘‘ए आम्मा हो’ ‘कुरो’,‘ब्रोको कपालचाहिँ हो के’,र ‘ जिग्री ब्रो सोलमारी गएर डबका हान्नुपर्छ ’ भन्ने थेगो सबैको मुखमा झुन्डिन सफल भएका छन् । उनलाई उनका फ्यानहरुले जहाँ गए पनि यिनै थेगोलाई थुप्रै पटक वान्स मोर भनिरहेको देख्न सकिन्छ । बले पात्रका रुपमा मात्र नभएर भविष्यमा अरु पात्रका रुपमा अझ राम्रो अभिनय गरेर आफ्नो कलायात्रालाई अगाडी बढाउँने उनको सोच छ । अनलाइन सन्देश